Qalfoofka Halloween ee musqusha Qurxinta Xaflada Halloween oo Cod La Dajiyay
Meesha Asal ahaan: Zhejiang, Shiinaha
Magaca Brand: Shinny
Nambarka Model: S0252
Farsamo:Gacan lagu sameeyay
Astaanta Macmiilka:Daabacaadda & Tag & Darista
Waqtiga hogaaminta:25-35 maalmood, waxay kuxirantahay tirada la dalbaday
Muddada rarida: FOB, CFR, CIF
Muddada Lacag-bixinta: 30% T/T Horudhac ah & 70% Kahortagga Nuqulka B/L
Xidhmada Gaadiidka: Xidhmada Gaarka ah
Nooca:Agabyada & Xafladaha
Dhacdada & Nooca Shayga Xafladda:Haye Sixirka
Kartida Sahayda: 50000 Qaybaha/Qeybaha Todobaadkii
2.Baakadaha dibadda:A=B 3-lakabyada dhoofinta kartoonka.ama sanduuqa midabka la habeeyey.
3. Xidhmada Rarida: kartoonka dhoofinta (xajmiga gaarka ah)
Tirada (Qeybaha) 1 - 50000>50000
Est.Waqtiga (maalinta) 20 In laga xaajoodo
1. Waayo aragnimo qani ah oo 28 sano ah iyo xirfad shaqo oo dhankan ah.
2. Dhammaan su'aalahaaga, waxaanu kuugu soo jawaabi doonaa 12 saacadood gudahood.
3. Dhammaan qofkayaga wax iibinaya oo leh dareen masuuliyad sare leh iyo Ingiriis wanaagsan.
4. Waxaan bixinaa adeegga OEM / ODM.Waxba beddeli kara summada iyo sumadeynta oo ku dhejin karaa summadaWaxay u habayn kartaa sanduuqa baakadaha tafaariiqda si waafaqsan shuruudahaaga.
Qosol iyo ciyaar
1 pc / opp bac, xirmo dibadda ah sida loo habeeyey
* Qiimaha tusaalaha
* Soo saarista tirada badan
*Shuruudaha lacag bixinta
T/T, Western Union, Paypal, Hubinta Ganacsiga
Ku saabsan qiimaha:
1. Ma haysaa qiimo tartan ah?
Dabcan, waxaan leenahay warshad u gaar ah si aan kuugu soo bandhigno qiimaha tartanka. and soo dhawoow booqo warshadeena .
2. Sideen ku heli karaa qiimo dhimista?
Sicir-dhimista ayaa ku xiran tirada dalabkaaga.Dalabka yari waxa uu lahaan doona qiimo sare. Dalabkaaga wareeggu waxa uu kaa caawin karaa in aad hesho qiimo dhimis weyn.Wakhtiga keenista, alaabta iyo Graft waxa ay saamayn doonaan qiimaha.
Ku saabsan tayada:
1. Sideed u xakameysaa tayada?
Warshadayadu waxay leedahay waayo-aragnimo wax-soo-saarka wax-soo-saarka oo ka badan 28 sano.Dhammaan shaqaalaheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo 10-25 sano ah oo ku saabsan alaabta lagu ciyaaro ee cufan. Waxaan mid mid u hubinaa alaabta dhammaatay, hubi in tayada ay wanaagsan tahay.
2. Sideen samayn karaa haddii aan helo alaabta tayada xun?
Noo sheeg inta pcs ee alaabta xun, noo soo diraya sawirada, waxaan soo celin doonaa 2-10 jeer qiimaha ama dib u samee alaabta adiga.
Ku saabsan MOQ:
1. Waa maxay MOQ-gaagu?
Macaamiisheena hore, ma jiro MOQ.10 PCS, 100 PCS… WAA OK.
Haddii aad tahay iibsade xirfadle ah ama ku takhasusay, waxaanu ku samayn karnaa tiro aad u yar.500 pcs ama 1000 pcs.Waxaan rajeyneynaa in mid ka weyn uu jiri doono intaas ka dib.Markaa ma jiri doonto MOQ adiga.
Ku saabsan wakhtiga dhalmada:
1. Waa maxay wakhtiga dhalmada?
Caadi ahaan, waa 7-15 maalmood oo shaqo iyadoo loo eegayo tiradaada. Dalabkaaga degdegga ah waa mid la aqbali karo, 10-30 maalmood waa ok.Laakin waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag badan. Ku soo dhawoow inaad soo booqato warshadeena!
Ku saabsan suuqayada ugu weyn:
1. Waa maxay suuqaaga ugu weyn?
Macaamiishayada ugu muhiimsan waxay ka yimaadeen Europe, USA, Canada, iyo dalal kale.
Hore: Baxsashada Guriga Haunted ee Qurxinta Qurxinta Halloween-ka Laadlaadsanaysa Ruuxa Dhaqaaqaya Ciyaarta Hallowee ee Cage-ga Korantada
Xiga: Qurxinta Qalfoofka Halloween ee ku dhex jira saxarada qubayska
Xaflada Dadka Waaweyn ee Halloween Caarada Caarada Toy Simul...
Iibka Kulul ee 2021 Halloween ghost festival lafo sto...
Alaabta carruurtu ku ciyaarto caag fiiqan...
Animal Halloween Fashion muraayadaha Xaflad qosol leh pl...
Hadiyada fasaxa, koofiyadda jiilaalka, Alaabta Cusub, alaabta fasaxa, Gift Toy, Koofiyadda Bakaylaha,